Ciidamada Ahlu Sunna oo diiday inay Matabaan soo galaan ciidamo ka tirsan AMISOM & Gurmad Ciidan.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Ahlu Sunna oo diiday inay Matabaan soo galaan ciidamo ka tirsan...
Ciidamada Ahlu Sunna oo diiday inay Matabaan soo galaan ciidamo ka tirsan AMISOM & Gurmad Ciidan..
Matabaan (Halqaran.com) – Ciidamada Ahlu Sunnada Gobolada Dhexe ayaa waxay is hortaag ku sameeyeen Ciidamada Militariga Jabuuti ee qaybta ka ah AMISOM in ay gudaha u soo galaan Magaalada Matabaan ee Gobolka Hiiraan.
Ciidamada Jabuuti oo ka amba baxay Magaalada Baladweyne, kuna sii jeeday Magaalada Matabaan ayaa waxaa lagu wargeliyay inaanay gudaha u soo geli karin Magaalada Matabaan, haddii kale ay gacan bir leh kala kulmi doonaan ciidamada Ahlu Sunna.
Wararka naga soo gaaraya Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ay ka dirtay ciidan gurmad ah, isla-markaana ay gaareen duleedyada Magaalada Matabaan.
Ahlu Sunna Gobolada Dhexe oo ka arrimiso Magaalada Matabaan ayaa waxay ka shaki qabtaa in Ciidamada AMISOM ay doonayaan in ay Matabaan uga sii gudbaan Magaalooyinka Guriceel iyo Dhuusamareeb.
Madaxda Ahlu Sunna ee ku jira Maamulka Galmudug ayaa waxay marar badan ku celceliyeen inaanan deegaanadooda looga baahnayn Ciidamada AMISOM, weligoodna ay ku filnaayeen amnigooda, balse ay taasi u cuntami la’dahay Dowladda Somaliya.
Diyaarad nooca xamuulka qaadda ah ayaa waxay maanta Magaalada Dhuusamareeb ka dejisay gaadiidka qufulan ee dagaalka, lamana ogga cidda iska leh, hase ahaatee Ahlu Sunada Gobolada Dhexe ayaa loo sheegay inay leeyihiin Ciidamada Dowladda ka socda ee ku sugan Dhuusamareeb.
Si kastaba, magaalooyinka ay ka arrimiso Ahlu Sunada Galmudug ayaa waxaa lagu sheegaa kuwo ka mid ah magaalooyinka ugu amniga wanaagsan ee dalka ku yaala.
ciidamo ka tirsan AMISOM